Warbixin Kasoo Baxday Q.Midoobe oo Dowladda Federaalka Ku Eedaysay – Banaadir weyne
Madaxa xuquuqul insaanka Q,Midoobe Zeyd Racad Al-Xuseen ayaa sheegay in hay’adda Sirdoonka DF-ka ay xabsiyada ku gurto saxafiyiinta madaxa banaan islamarkaana maxkamad la’aan lasii daayo.
Waxa loogu yeero Q.Midoobe ayaa ka dayrisay cadaadiska daran ee xukuumadda Villa Somalia ay ku heyso ragga wararka fidiya ee ka howlgala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho “inkastoo warbaahin firfircoon ay kajirto soomaaliya oo laga heli karo in kabadan 90 aalado warbaahineed ah sida Idaacado,Telefeshinno Blogs iyo website-yo hadane waxaa jira xadgudubyo daran oo lagula kaco saxafiyiinta iyo saxaafadda”ayaa lagu yiri warbixinta.
Q.Midoobe waxay ku eedaysay sirdoonka DF-ka in ay jeelasha ku guraan dhammaan saxafiyiinta ay u arkaan in ay baahinayaan warar iyada ka dhan ah iyagoo aan marin sifo sharci ah.
“iyadoo horumar siyaasadeed kajiro soomaaliya sanadda 2016 hadane waxaa jirta in hay’adda sirdoonka NISA ay tacadiyo ku heyso saxafiyiinta oo ay diidantahay xaqqa xuriyadda hadalka”ayaa lasii raaciyay warka kasoo baxay Q.Midoobe.
Sidoo kale warbixinta ayaa qirtay in sirdoonka DF-ka uu adeegsado jirdil ka dhan ah maxaabiista si ugu dambeyn ay ugu qasbaan dhibanayaasha qiraal ah in ay katirsanyihiin xarakada SHM.
Zeyd Racad Alxuseyn madaxa xuquuqul insaanka Q.Midoobe wuxuu xaqiijiyay in maamulka dowladda Federaalka Soomaaliya uu caado ka dhigtay caburinta saxafiyiinta iyo siyaasiyiinta kasoo horjeeda.
intii u dhaxaysay sanaddii 2012 illaa 2016 ayaa Soomaaliya lagu dilay 30 saxafi iyo 18 xildhibaan.
Warbixintan cusub ayaa muujinaysa in cidda kaliya ee saxaafada dagaalka kula jirta ay tahay dowladda Federaalka gumeysi kalkaalka ah oo diidan in lasoo bandhigo gummaadka ay ciidamada shisheeye ku hayaan shacabka Soomaaliyeed.
Waxaa beenoobay eedaymihii loo jeedin jiray xarakada Al Shabaab ee ahaa in ay disho saxafiyiinta madaxa banaan iyadoo aanan taqriirkan cusub lagu sheegin in Al Shabaab ay dhibaato daran ku hayso saxaafadda.